गत चैत १२ गते कोभिड–१९ का कारण सरकारले लकडाउन लगाएको एक वर्ष पुग्यो । एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा फेरि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले हामीलाई लपेट्ने हो कि भन्ने त्रास बढाएको छ । छिमेकी भारतलगायतका कतिपय देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्ररुपमा..
सबै ब्रान्डको एकमात्र गन्तव्य, सहरभित्रको सहर हो सिजी ल्यान्डमार्क : उज्ज्वल केसी, मल म्यानेजर २०७७, १२ माघ सोमबार
१. भरपुरमा सिजी ल्यान्डमार्क सञ्चालनमा आएको १६ महिना भएछ । यसबीचको तपाईंहरुको अनुभव कस्तो रह्यो ? हामी एकदमै उत्साहित छौं । चितवनबासीको चाहना र हाम्रो उद्देश्यबीचको तालमेलले यो उत्साहको मुख्य कारण हो । हामीले मुलुककै केन्द्रभागमा विशाल..
चितवन : अनुप विसुराल पूर्वी चितवनका युवा व्यवसायी हुन । सानै उमेरमा व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विसुराल आफ्नो व्यवसाय प्रर्बद्धनसंगै व्यवसायिक सुरक्षा र एकतामा पनि चिन्तित हुने गरेका छन । शिखर पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक विसुराल भर्खरै २६..
चितवन : भरतपुर महानगरपालिका वडा ३ निवासी हुन् युवा व्यवसायी गोपाल श्रेष्ठ । विगत लामो विभिन्न सघसंस्थासगैँ होटल व्यवसायमा रमाएका श्रेष्ठ एउटा आशा लाग्दो युवा व्यवसायी पनि हुन् । जसका उनी यतिवेला होटल व्यवसायी संघ चितवनको महासचिवमा नेतृत्व..
शनिबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रमलाई नेकपाकै कार्यकर्ताले विथोल्ने प्रयास गरे । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा भइरहेको बैठक कक्षमा पसेर एकाएक..
चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो । सबै समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई..
चितवन : आज २५ औं विश्व अण्डा दिवस । विश्वभर कुखुरापालन व्यवसायको विकासभएसगै विश्वभरका पोल्ट्री व्यवसायीहरुको सन १९९६ मा इन्टरनेशनल एग कमिशन स्थापना भएको र हरेक अक्टुवर महिनाको दोश्रो शुक्रवार विश्व अण्डा दिवस मनाउने परम्परा अनुसार २०७७ असोज..